BFV-SG: manohana ny asa tanana | NewsMada
BFV-SG: manohana ny asa tanana
Haranty ao amin’ny masoivohon’ny banky BFV-SG ao amin’ny araben’ny Fahaleovantena ny zava-bitan’ny vondrona mpanakanto, ny Gasy Rug, nanomboka ny 22 novambra teo hatramin’ny 30 novambra ho avy izao. Mampiavaka azy ireo ny fikirakirana ny rary avy amin’ny taretra, toy ny fanaovana tsihy na karipetra lehibe vita amin’ny tanana.
Mampiasa akora fototra avy eto an-toerana ny Gasy Rug, ary namolavola ny endriny ny mpanakanto Pascale Vetois. Miara-miombon’antoka amin’ny Alliance française Toamasina ny BFV-SG amin’ny fanohanana ny Gasy Rug izao, tafiditra ao anatin’ny asa sosialy miteraka asa.
Taozavatra efa natao tao amin’ny rovan’i Manjakamiadana, fony taonjato faha-20.
Mifanojo amin’ny faha-20 taona nisian’ny banky BFV-SG eto Madagasikara ihany koa izao tranga izao. Fotoana manamarika ny fahavononany hanatsara hatrany ny tolotra sy ny fanomezana fahafaham-po ny mpanjifa. Azo adika fa tafiditra ao anatin’ny fitaratry sady mampifandray ny Malagasy ity banky ity, ankehitriny. Tanjony rahateo ny fandraisana anjara mametraka ny fampandrosoana maharitra ny toekarena, ahafahan’ny tsirairay manatanteraka ny tetikasany avy.